Previous Article Abalị 29 nke ọnwa Mee bụ ụbọchị ezum-ike ọchịchị onye kwuo uche ya
Next Article Ịbu agha megide mpụ na aghụghọ
A kpachiela mmadụ asatọ bụ ndị na-agba mbọ ihụ na ọchịchị onye kwuo uche ya kwụdosiri ike na mba Kongo Demokratik. Nke a mere n’ụbọchi Nwenezdee gara aga, oge ha na-akwado ime ngaharị udo maka oge A na-egbu n’ime ntụliaka nke E ji ahọpụta onye isi ala.
Onye isi ala mba Kongo, Joseph Kabila, achịala yabụ mba kemgbe afọ puku abụọ n’out. Iwu mba ahụ gosiri na Ọ ga-arịtu n’ọnwa December. Mana otu ndọrọ ndọrọ na-achị mba ahụ nakwa ụfọdụ ndị na-agba ya ụkwụ kwekoritara ka Ọ nọrọ n’ọkwa ruo n’ọnwa April afọ puku abụọ n’iri na asatọ. Mgbe ahụ ka A ga-ahọpụta onye onye isi ala ọhụrụ.
A kpachiri mmadụ asatọ ndi ahụ so n’otu A kpọrọ Struggle for Change n’olu bekee, n’obodo Goma, oge ha na-akwado ịga nọrọ n’akụkụ isi ụlọ ọrụ mba ụwa.
Akụkọ kọrọ na ụfọdụ mmadụ ka A kpachiri na Goma n’ụbọchị Mọndee, oge ha na-eke akwụkwo ozi maka inwe ngagharị udo n’ụlọ akwụkwọ mahadum. A kpachiri ndi ọzọ ebe ha gara ileta ha n’ụbọchị Tuzdee.
Ọnụ na- ekwuru ndị uweojii kwenyekwara na E mere yabụ mkpachi n’ụbọchị Nwenezdee, ma kwuo na ọ bụ maka inye ohaneze nsogbu.
Gọọmenti tọghapụrụ ọtụtụ ndị ahụ na-akpọ ganị ganị tinyekwara ndi otu LUCHA, n’ọnwa Julaị nakwa Ọgọst, iji hụ na E nwere mkparị ụka udo gbasara oge A ga-eme ntụliaka.